mardi, 24 novembre 2020 21:35
Lingot volamena 1kg miteti-bidy 50 000euro
Pilo kely : Lingot volamena 1kg miteti-bidy 50 000euro (235 000 000ar) any ivelany, 180 000ar ny grama, na 180 000 000ariary ny kg ( 38 300euro) Oviana moa ilay comptoir de l'or no hajoro? Tafandria mandry e.Patrick (Tahirin-tsary volamena malagasy mivoaka par silence)
Raha jerena ny vidin'entana eto amintsika, indrindra fa ireo entana hafarana avy any ivelany, toy ny hita amin'ireny centre commercial ireny, dia vidin'entana 1.5-2 avo heny amin'ny vidin'ny amarotana azy any ivelany. Azo azavaina izay amin'ny haba, sy ny fitaterana ilay entana avy any ivelany mandeha aty. Izany hoe lafo fianana indroa avo heny noho ny any an-dafy izany ny antsika, nefa ny karama sy ny vola miditra Ariary, izay efa ho 5000 ar ny Euro ary 4000ar ny dolara. Tafandria mandry e.Patrick
Mahatratra 251 ankehitriny ireo olona matin'ny Covid-19 hatramin'ny nidiran'io aretina io teto Madagasikara. Olona iray no maty teo anelanelan'ny 14 novambra sy 18 novambra 2020. Miisa 31 ireo olona vaovao mitondra ny otrikaretina tamin'ireo 742 nanaovana fitiliana. 65 ireo sitrana, ary 433 ireo manaraka fitsaboana. Tafandria mandry ePatrick
samedi, 21 novembre 2020 21:15
Pilo kely : Nareo mpampianatra, aza fenoanareo tsipika mena ny feuille d'examen fa tsy hinoan'ny dadiko
Naseho dadiko feuille d'examen - Moan ino aby tsipitsipika mena reto?- Tsy tsipika io Dady fa cocher ny mpampianatra, izay réponse marina- Za na tsy mahay mamaky teny, tsy avandesanao, tsipiky mena maro be io tsy manjary zany examen nao- 19/20 io Dady e- ahaha, zero dikan'ny tsipitsipika mena jiaby io Bonne nuit nareo ein, dadiko ato nagnajimaPatrick
Raha mijery ny tantara romanina isika, na ny tantaran'ny Jody, na ny mety akaiky ny maro dia ny tantaran'i Kristy, izay andraisana ny fikajiana ny taona, dia efa nikararo avokoa ny olona tamin'izany, efa natsaka teo amin'ny vovo ny olona. Isika 2000 taona aorian'i Kristy, mbola tsy mikiraro, mbola maro no tsy manana vovo fatsakana, ny misotro rano-potaka, na Jirama vidiana mbola feno loto sy fotaka, tsy resahina ireo any atsimo maka rano amin'ny arabe amin'ny fotaka. Mbola tapitra mahandro amin'ny kitay sy saribao ny 99% n'ny Malagasy. Mbola ampianarina ary anaovana andro iraisam-pirenena ny fanasana tanana. Olona avy mandeha WC, maro ny mbola tsy tonga saina manasa tanana, fa vao vita ny pipi na caca, dia lasa, dia mihinana tanana feno pipi sy caca. Maro ny viavy, tsy manana serviette hygiénique, fa dia izay vorodamba misy ao no sasasasana.Maro ny lehilahy voretra, zara raha misaika, na tsisy rano na efa lasa fahazarana ny havoretrana.
Pilo kely : Naleo Malagasy hafahafa hoy Sinoa Omby miasa, kapohina, ho anina. Alika tsy miasa, safosafona, tsy ho anina. Bonne nuit naleoPatlika
Sary nalaina sy nindramina tanaty vidéo
Pilo kely : Tsy efa ilaina masotsivana amin'izay ve ireo afaka hilatsaka ho fidiana Député fa tsy hionina fotsiny hoe izay lanim-bahoaka? Solombavam-bahoaka voafidy tao Ambilobe milako SG Kaominina. Tafandria mandry e.Patrick(Jereo Sary Tohiny) (Sary nalaina sy nindramina tanaty vidéo)
Io saintsika io dia miasa tsy baikoina, na matory aza ianao dia miasa foana izy io.Raha misy tanjona tianao ho tratra, dia eritrereto iny tanjona iny, raiso an-tsaina tsirairay ny fomba anatratraranao azy. Esory an-tsaina ilay eritreritra mihiba, satria voatanan'ny saina iny, ka dia ho amafisiny hatrany iny mihiba iny, ka hitarika hakiviana ho anao. Raha mijery mihabo ianao dia hijery mihabo ihany koa io sainao io, ka hibaiko ny vatanao rehetra ho mihabo sy atanjaka anatanterahinao ny tanjonao. Azo atao ny manisy sary ho peta-drindrina ao antranonao ho hitan'ny masonao hatrany ny tanjonao, ohatra Plan trano, na modely fiara, na tracteur, na fambolena. Alaviro ireo namana tsy sasatry ny manakivy sy mijery mihiba, tsy izy no resenao lahatra amin'ny tanjona tianao tratrarina fa ny sainao miasa mangina izay manira-tena mihiba na mihabo arakaraky ny baiko omenao azy. Tafandria mandry e.Patrick
Pilo kely : Jerosalema vita Corona Merci Prezida. Tafandria mandry.Patrick
Fa io ve na lahy na vavy tsy heloka mitovy sy sazy mitovy ihany, ary ny code pénal ve tsy efa miresaka sy manasazy izay olona mandratra olon-kafa na lahy mandratra vavy, na vavy mandratra lehilahy, na samy vavy na samy lahy, dia ho asiana fitsarana manokana momba ny "Genre" koa kelikely? Tafandria mandry e.Patrick